घाममा छाला किन डढ्छ ? | गोठालो खबर – सूक्ष्म समाचार , डिजिटलको आधार
घाममा छाला किन डढ्छ ?
४ मंसिर २०७८, शनिबार १९:३८
एजेन्सी । घामको परावैजनी किरणको अत्यधिक सम्पर्कमा आएपछि छाला डढ्ने गर्छ । लामो समय अथवा बारम्बार घाममा बस्नाले छाला डढ्छ । छाला डढ्दा छालालाई मात्र होइन् अन्य रोगको खतरा समेत बढाउछ । यसले रुखो छाला, कालो दाग र छालाको क्यान्सर जस्ता रोगपनि बढाउछ ।
छालालाई बचाउने हो भने सकेसम्म घाममा ननिस्कने । निस्कनै परेमा छालाको सुरक्षामा पुर्ण रुपमा ध्यान दिने ।
घामको सट्टा शितलमा बस्ने, हिड्ने
घामबाट आँखा जोगाउनको लागि सनग्लासको प्रयोग गर्ने
शरीरलाई घामबाट जोगाउन पुरै कपडा लगाउने, शरीरको सबै अंग ढाक्ने गरी कपडा लगाउने ।
सकेसम्म बिहान १० बजेपछि र बेलुका ४ बजेको बिचमा घाममा ननिस्कने, किनकी यस समयमा सुर्यको किरण सबैभन्दा तिव्र हुनेगर्छ ।
सनस्क्रिनको प्रयोग गर्ने । तपाईको छालाको प्रकार अनुसारको एसपीएफ १५ वा त्यो भन्दा बढी स्पेक्ट्रेम प्रोटेक्शन भएको सनस्क्रिनको उपयोग गर्नुपर्छ ।